Toyota Belta 2009 g | No.1 myanmar cars websiteNo.1 myanmar cars website
Toyota Belta 2009 gကားတန်ဖိုးကျပ်(သိန်း) 215
Date Posted : 25 June, 2012
1300cc,G grade, push start,
heinhtetag	Toyota Belta push start G 2009 late
ကျပ်(သိန်း) 118 Toyota Probox DX 2008 ( 118 Lks )
အမည်ပေါက်ရနိူင်ပါသည် 15THMay တွင်ဆိပ်ကမ်းရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကြိုပွိုင့် မှာယူနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိ၇ှိလိုပါက Car Junction Co .,Ltd ဖုန်း 01 2301466, 09 4500 41115 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ကျပ်(သိန်း) 92 2002 Toyota Ipsum (+Slip)
A Good Car that includes ‘Air Conditioning, Power Steering, Power Window, Power Mirror, Anti Brake System, Central Locking, Alloy Wheels, Dual AirBags, 4-Very Good Condition, 2400CC, Petrol, Auto, Right Hand Drive’. 92 Lakhs + Slip
ကျပ်(သိန်း) 115 Toyota probox
လက်လှဲ့ colour-white DX
အလားတူ ၄ စီးရှိသည်
Arkarmoemyat Arkar: Nout nay tar lar..?50 ya kan kg...
Sai Htun Htun: 1000 km ???...
Soe Lin Htat: Yoo twarblar byar?...
အိမ် လွမ်းသူ: 94 mark2ကို 150?? ဟုတ်ရော�...
Ye Myo Thwin: အသေးစိတ် အချက်အလက�...
Ko Aung Moe Lwin မှ ရောင်းရန် 78 ကား ရောင်းရန်ရှိ
AMMPDS မှ ရောင်းရန် 47 ကား ရောင်းရန်ရှိ